Digital Tire Gauges Factory, Suppliers |China Digital Tire Gauges Manufacturers
● Slimline dhizaini uye huremu huremu, inopa kushomeka kwekushanda uye nyore pakushanda kwezuva nezuva.
● Kuvaka basa rinorema neakaomarara die casting Aluminium alloy body inorebesa nguva yesevhisi.
● Hybrid rubber hose ine inodzivirira wiring inodzivirira kukwenya, kucheka uye kinking.
● Ergonomic dhizaini inopa zvakanyanya kugadzikana kubata uye inobvisa kuneta
● Combination trigger ine 2 stage valve mechanism.
● Batidza otomatiki kana waonekwa kuti mweya uri patai, wodzima otomatiki pashure pemasekonzi 30 ekusaita basa.
● Inofambiswa ne2 x AAA mabhatiri, 4 nguva yehupenyu hwebhatiri uye kuiswa nyore kwebhatiri.
● LCD dhijitari inoratidzira ine super yakajeka backlight, yakafara kuona angle pasina bofu nzvimbo.
● High Accuracy (pasi pe1%) uye 0.1psi kugadziriswa kwekushandiswa neTPMS (Tire Pressure Monitoring System)
● TheNyanzvi yeTire Inflatoryakaverengerwa & yakasimbiswa chokwadi mukati me1% ine 0.1 psi kuratidza resolution, yakachengeteka zvakanyanya uye yakanakira pane analog vhezheni!Tsigira mhando ina dzezviyero.Ranges: 0 ~ 175 PSI, 0 ~ 12 Bar, 0 ~ 1200 KPa, 0 ~ 12 Kgf / cm².
● Chivharo chemhepo chinovhara nokukurumidza chinopa chisimbiso chakanakisisa pavharuvhu yevhiri iri kunze kwevhiri remotokari uye unosunungura maoko ako kuti ushandise inflator yevhiri.
● 3-in-1 basa: tarisa kumanikidzwa kwevhiri, wedzera matai nemhepo uye bvisa matai.1/4 “NPT inokurumidza kubatanidza murume anokwana akagadzikwa netayi geji inogona kubatana nemhepo compressors kune ese emota matai inflation.(Iva nechokwadi chekuti mhepo compressor yako inogona kushanda nemurume 1/4 “NPT inokurumidza kubatanidza yakakodzera).
● Backlit LCD kuratidza kunoita kuti zvive nyore kuverenga.Heavy duty clip-on air chuck inoita kuti zvive nyore kukiya pamavharuvhu.TheNyanzvi yeTire Inflatoryakasanganiswa nehupamhi hwekuyeresa huwandu hunobvumira kuiswa kune akasiyana siyana saizi nemhando dzematayi: kubva kumota dzekuvaka, marori mahombe, maSUV uye mota kusvika kumidhudhudhu nemabhasikoro.
● YeduNyanzvi yeTire Inflatorinovakwa neyakasimbiswa inoumbwa muviri kuti ive nechokwadi chekushanda kwenguva refu uye chaiyo yendarira air chuck yekudzivirira ngura.
● Minimum Order Quantity: 1,000pcs
● The digital air pressure gauge gauge inflator ndeye 3-230PSI digital inflator geji ine chokwadi che ± 1PSI kana 1% yechiyero chakazara.Inotsigira zvikamu zvina (PSI / KPA / Bar / Kg.cm2) inogona kuchinjwa nekudzvanya bhatani reyuniti.
● Yakashongedzerwa zvizere neZinc alloy die casting body w/ yakashata matte poda nhema yakavharwa kupera.
● Iyo digital air pressure gauge inflator ine kesi yekudzivirira pamusoro pegeji yekudzivirira kukanganiswa, inoshingirira kuoma kwegaraji repamba kana kushandiswa kwechitoro chekutengesa.
● Push-to-Inflate air filler thumb trigger, uye yakavakirwa mukati air bleeder valve kuti ikurumidze kufefetera pasi matayi akawandisa.
● The digital air pressure gauge gauge inflator inogona kuratidza kukosha kwekuedzwa kwemasekonzi 2-3, iyo yakanakira kuverenga, pasina kufungidzira neanalog geji.Iine backlight function uye inogona kuverenga zvakajeka kunyange murima.Ichadzima otomatiki kana pasina kushanda mukati memasekonzi gumi nemashanu kuchengetedza simba rebhatiri.
● Mhepo inopinza ine 1/4” NPT / BSP shinda yechikadzi inoita kuti ienderane neakawanda air compressor.
● Brass clip pavhiri chuck inogona kubatanidzwa nechero Schrader valve.Brass zvinhu zvinopa zvakanyanya kusagadzikana nekuora.
● 20inch / 40cm tsoka inoshanduka rabha hose ine swivel air chuck connector.
● Nhamba shoma yekuraira: 1,000pcs
• Digital tire inflator gauge inogadzirwa neplastic house uye yakavakirwa mukati mendarira masimbi anoshingirira kukwira
• Hand trigger inflate and thumb press air release valve
• Digital tire inflator geji inokwira kusvika 175psi / 12 Bar / 1,200kpa
• 20“(500mm) hosi yerabha yakasanganiswa
• 3.5″ LCD kuratidza ine backlit
• Digital tyre inflator geuge inobvumira kuverenga kwakaringana kwekumanikidza kwetai kunobatsira nekushanda kwekushandisa neTPMS (Tyre Pressure Monitoring System)
• Inoshanda pane nitrogen system
• Digital tire inflator geji yakavharwa nerabha inodzivirira
• 2 x AAA mabhatiri, akabatanidzwa
• Iyo yedhijitari tire inflator gauge maficha akavakirwa-mu LED backlight kuti ishandiswe munzvimbo dzakaderera dzinoonekwa
• Range: 3 ~ 145psi / 0.2 ~ 10 Bar
• Inopihwa 480mm hose yerabha uye sikuruu pane chinobatanidza
• Digital tire inflator gauge inoshandiswa ne 2 x AAA mabhatiri, akabatanidzwa
• Calibrated muBar, PSI uye kPa
• Kudzima otomatiki kuchengetedza hupenyu hwebhatiri uye kuderera kwebhatiri chiratidzo
• Ivhavha yekudzivirira
• 1/4″ NPT kana BSP inopinza
• Digital tire inflator geji inopihwa neplug adapter
Pistol Yakabata Tire Inflator With Digital Gauge
● The pistol grip tire inflator ine digital gauge range inosvika 120 psi / 10 bar ine increment ye 0.1 psi kana 0.01 bar uye kururama kwe ± 1 psi / 0.1 bar kana 1% yechiyero chakazara.
● Pane zvikamu zvina zviripo: psi / kpa / bar / kg.cm2, iyo inogona kuchinjwa nekubata bhatani rekurudyi pane panhizha.
● Iyo unit inovakwa ne ergonomic mubato mune inoumbwa zvinhu, iyo isingaremi uye yakanakira kutakura.Mubato weComposite unopa zvakanyanya kusagadzikana nekuora uye kudzivirira mafuta.
● Pistol grip tire inflator ine digital gauge inongozvibatika kana ichicheka mhepo pavharuvhu yevhiri uye kuyera mhepo yemhepo (kwete yekuponja vhiri).Hapasisina kufungidzira neanalog geji.Iine backlight function uye inogona kuverenga zvakajeka kunyange murima.
● Clip pamhando yevhiri chuck yakagadzirwa nendarira yakasimba, iyo inogona kubatanidzwa nechero Schrader valve.Brass zvinhu zvinopa zvakanyanya kusagadzikana nekuora.
● 12 inch / 30cm flexible rubber hose.
● IzviProfessional Digital Tire Gaugendeye 3-230PSI digital inflator ine huchokwadi hwe ± 1PSI uye inotsigira 4 switchable units (PSI / KPA / Bar / Kg.cm2).Inogona kushandiswa kuyedza kumanikidza kwetai, kubva pamabhasikoro kusvika kumarori anorema.
● IzviProfessional Digital Tire Gaugeinogona kuratidza kukosha kwekuyedza kwemasekonzi 2-3, iri nyore kuverenga, hapasisina kufungidzira neanalog geji.Iine backlight function uye inogona kuverenga zvakajeka kunyange murima.Ichadzima otomatiki kana pasina kushanda mukati memasekonzi gumi nemashanu kuchengetedza simba rebhatiri.
● IzviProfessional Digital Tire Gaugeinotsigira deflation mabasa.Side deflation valve inobatsira kuburitsa yakakwira mhepo, zviri nyore kuwana iyo chaiyo tire yekumanikidza kuti igadziriswe.Deredza kupera kwematayi uye kunatsiridza mashandiro emotokari.
● Iyi digital tyre pressure gauge ine 360 ​​° rubber air hose uye swivel ball foot air chuck, iyo inorema-duty nozzle inogona kutenderera kuti isvike mavharuvhu evhiri zviri nyore & kuchinjika, izvo zvinoita kuti zvive nyore kubatanidza vhiri neSchrader valve pasina kubuda mweya.Inobatsira kuwedzera hupenyu hwematayi, kuvandudza hupfumi hwemafuta, kuderedza mutoro pamotokari, uye inobvumidza iwe kunakidzwa nekutyaira kwakagadzikana uye kwakagadzikana.
● IzviQuality Digital Tire Gaugemitsara 3-230PSI ine huchokwadi hwe ± 1 psi uye inotsigira 4 zvikamu (psi / kPa / Bar / Kg.cm2).Inogona kushandiswa kuyedza kumanikidza matai kumota, lawn tirakita, tirakita, SUV, Pick-up, marori nemotokari dzinorema etc.
● TheQuality Digital Tire Gaugeinogona kuratidza kukosha kwemhepo yekumanikidza kwemasekonzi gumi nemashanu, hapana chikonzero chekufungidzira chinoshanda nema mechanic geji.The backlight function inoita kuti iverengeke zvakajeka kunyange murima.Iyo unit inodzima yega mumasekonzi gumi nemashanu, kana pasina oparesheni, kuchengetedza simba rebhatiri.
● Iyo geji inoratidzira deflation mabasa.Iyo air bleeder valve pahunde inobatsira kuburitsa mhepo yakakwira muvhiri, nyore kuwana iyo chaiyo tire kudzvanywa kuti igadziriswe chaiyo, iyo inovandudza mashandiro emotokari, kuderedza kupera kwetai uye kuchengetedza kushandiswa kwegesi.
● IzviQuality Digital Tire Gaugeine flexible air hose uye 360 ​​degree swivel bhora tsoka yemhepo chuck, inogona kutenderera kusvika kumavharuvhu etai zviri nyore & kuchinjika pasina kudonha.Inobatsira kuwedzera hupenyu hwematairi, kuvandudza hupfumi hwemafuta.
● Ergonomic composite mubato, isiri-chepfu, isinganhuhwi uye inoshamwaridzana nenharaunda.Simbi yekubatanidza tsvimbo ine Chrome yakapfava uye swivel dhizaini inodzivirira kupfeka uye inogara.Inoenderana neRV/Trick tire valve stem, iyo inochengetedza chaiyo tire kudzvanywa, kuderedza kupera kwetai uye kuwedzera hupenyu hwetai.
● Dual head (push-pull) tire chuck inoita kuti kuyerwa kuve nyore kana hunde yevharuvhu yevhiri yakamira munzvimbo dzakasiyana, ose emukati nekunze matai emavhiri ega uye maviri.Inotenderera tire air chuck inogona kuiswa kumota zhinji, kunyanya kumarori, trailer & RVs.Iyo yevharuvhu yepakati yakagadzirwa nendarira yakasimba, iyo inodzivirira ngura uye inoumba nyore chisimbiso nehunde yevharuvhu.Kuverenga mu 0.1 PSI kuwedzera, kupa nekukurumidza uye kwakaringana kuverenga.Kugadzika nezvikamu zvina: PSI, Bar, Kpa, Kg/cm.Range: 0-230 PSI kana 0-16 Bar.
● Bhatani rimwe rinoshanda, rakanakira kuchinja pakati pemayuniti mana nekungodzvanya bhatani zvinyoro nyoro.Iyo Digital Dual Head Tire Gauge ine mwenje we LED.LCD inoratidzira skrini ine backlight iri nyore kuyera uye kuverenga kunyangwe murima.
● Wide pressure measurement range: 0 - 230 PSI, yakanyatsogadzirirwa motokari dzinorema uye inobatsira kuchengetedza zvakakodzera matai, kuderedza kupera kwetai uye kuwedzera hupenyu hwebasa revhiri.Gomba rekurembera kumagumo uye slim profile iri nyore kuchengeta kana kuturika chero kupi, inochengetedza nzvimbo.
● Iyo yedhijitari yedhijitari musoro tire geji inofambiswa ne2 AAA mabhatiri, inoita kuti ishandiswe kwenguva yakareba.Zviri nyore kutsiva nekubvisa back cover.Iyo mota gauge yemota inodzima yega mu30s pasina oparesheni.Iyo yedhijitari mbiri yemusoro tire geji inogonawo kudzimwa nemaoko nekubata bhatani remagetsi re5s.Kushandiswa kwakasiyana-siyana kwemotokari, marori, van, Pick-Up, tirakita nezvimwe.
● Yepamusoro: Iyo Quality Digital Tire Gauge ine chiso che LED uye inoyera pakati pe5 ne150 psi.
● Kushandisa usiku: Tipi yakavhenekerwa inoita kuti kutarisa tsinga yevhiri usiku kuite nyore uye nyore
● Inonyaradza: Ergonomic grip yekubata nyore uye yakachengeteka yemhando yedhijitari tire gauge.
● Yakasiyana-siyana: Iyo Quality Digital Tire Gauge zviyero mupsi, kPa uye bar
● Kuvimbika: Kunosanganisira kudzima otomatiki uye bhatiri rinogara kwenguva refu
● Kusatsvedza kwemavara uye kuita kuti zvive nyore kubata
● Injiniya plastiki shell inokodzera zvose varume nemaoko evakadzi
● Yakagadzirirwa kuita kuti matai arambe achimhanya zvakanaka, kuderedza kupera kwematai uye kuwedzera upenyu hwematai uyewo kuchengetedza kushandisa oiri
● Pressure Unit Measures PSI, BAR, KPA, uye KGF/CM2 paSchrader Valves kusvika ku150PSI |1000kPA |10 Bar |10 kg/cm2
● Backlit LCD kuratidza chidzitiro uye Chiedza chinovhenekera chinopa kuoneka kwakajeka kunyange munzvimbo dzakaderera dzechiedza kana usiku
● Dzvanya bhatani re "ON/UNIT/OFF" kuti udzore;inodzima otomatiki mukati memasekonzi makumi matatu ekusaita basa
● TheQuality Digital Tire Gaugeinogona kushandiswa kuyera mota, mabhasikoro, mabhora, mabhoti erabha uye zvimwe zvigadzirwa.Iine huwandu hwakawanda hwekushandisa uye inokuunzira iwe rwendo rwakachengeteka uye rune hutano.
● Iine blue backlit LCD kuratidza uye backlit nozzle, iyo digital tire pressure gauge inoonekwa munzvimbo dzisina kujeka uye inobatsira kugadzirisa muromo kuvhavha kuitira chisimbiso chakanaka.
● Digital kuratidzwa kwekuverenga kwakajeka uye kwakarurama nehupamhi hwepamusoro mumatanho e0.1.4 zvikamu zvine huwandu: 0-150 PSI / 0-10 bar / 0-10 kg / cm² kana 0-1000 KPA;Hapasisina kufungidzira neanalog yekuyeresa zvishandiso.
● Bhatani rimwe rine mabasa matatu: ON / UNIT / OFF, kwete-slip texture uye ergonomic handle inoita kuti zvive nyore kubatisisa.Kudzima otomatiki mumasekonzi makumi matatu kuchengetedza magetsi.
● Gadzirisa jongwe rekumanikidza pavhiri, wozosvina zvakasimba kuti mhepo irambe yakasimba.TheQuality Digital Tire Gaugeinoratidza otomatiki kukosha kwakayerwa.